४६ बर्षको उमेरमा निरुता भन्छिन्,‘मनमा घण्टी बजाउने केटा चाहियो’ « हाम्रो ईकोनोमी
४६ बर्षको उमेरमा निरुता भन्छिन्,‘मनमा घण्टी बजाउने केटा चाहियो’
एक समय नेपालका ‘रोना धोनावाला’ फिल्मको पर्यायजस्तै थिइन्, अभिनेत्री निरुता सिंह।
फिल्म ‘दक्षिणा’ बाट नेपाली सिनेमामा प्रवेश गरेकी उनले त्यसपछिको एक दशक यस्तै भूमिकामा एकछत्र राज गरिन्।
उनले अभिनय गरेका ‘आफ्नो मान्छे’, ‘दर्पण छायाँ’, ‘ठूल्दाइ’ लगायत फिल्म हिट छन्।
फिल्म ‘फर्की आऊ’ पछि भारतको मुम्बई हानिएकी निरुता सात वर्षपछि फिल्म ‘नाइँ नभन्नू ल ५’ बाट फेरि पर्दामा फर्किइन्। हाल ‘दाल भात तरकारी’को सुटिङमा व्यस्त उनीसँग ‘सम्पूर्ण’का लागि सामीप्यराज तिमल्सेना र सृजना खड्काले खुलस्त संवाद गरेका छन्।
करिब सात वर्षपछि तपाईं ‘नाइँ नभन्नू ल ५’ मार्फत अभिनयमा फर्कनुभयो। पहिलो अनुभव के थियो ? लामो समयपछि मैले ‘नाइँ नभन्नू ल–५’ मा काम गरेकी थिएँ। सुरुमा के होला ? भनेर खुलदुली थियो।
तर, खासै नौलो अनुभव भएन। जति नै लामो ग्याप भए पनि एक्टिङको भोक वा नशा कलाकारमा सधैँ हुँदो रहेछ।
यहाँको वातावरणलाई भने मैले धेरै मिस गरेकी थिएँ। सुटिङ सेटमा दिलिपजी पछाडिबाट मेरो आँखा छोपेर आउनुभयो।
उहाँलाई देख्नेबित्तिकै म ‘आउट अफ कन्ट्रोल’ भएँ। अँगालो हालेर धेरै बेर रोएँ। उहाँ पनि भावुक हुनुभयो।
हामी फेरि फर्केर त्यही समयमा पुगेको जस्तो लाग्यो। एक समय एकदमै ‘पिक’मा हुनुहुन्थ्यो, हिरोले भन्दा धेरै पैसा लिनुहुन्थ्यो। यति हुँदाहुँदै नेपाली फिल्मलाई अचानक छाडेर किन जानुभयो ?
त्यो बेला फिल्मको स्तर घट्दै गयो। जस्तो पाए त्यस्तै फिल्म बन्न थाल्यो। जो पनि निर्माता, निर्देशक, हिरो, हिरोइन बन्न थाले। फिल्मको सुटिङ हेरेको भरमा निर्देशक हुन्थे। एकदुई पैसा जोरजम्मा हुनेबित्तिकै निर्माता। नयाँ निर्माता, निर्देशक आउनुुलाई मैले नराम्रो मानेको होइन। यो ठाउँमा काम सिकेर आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। तर, काम नसिकी आउँदा हामीलाई अप्ठ्यारो प¥यो। मलाई त्यो वातावरण पटक्कै राम्रो लागेन। ‘अब मैले काम गर्नु हुँदैन’ भन्ने लागेर छाडेँ।
फिल्म छाडेर सीधै मुम्बई जानुभयो। फिल्म छाडिसकेपछि मुम्बई जाने सोच आयो कि मुम्बई जानको लागि फिल्म छाड्नुभयो ? मलाई यहाँको वातावरणले हैरान बनाइसकेको थियो। मैले त्यो हेर्नै सकिनँ। त्यसको लागि विकल्प खोज्न थालेँ। मलाई इन्टेरियर डिनाइनिङमा पहिलादेखि नै रुचि थियो। त्यसैको कोर्स गर्छु भनेर मुम्बई गएँ। छ महिनाको लागि भनेर गएकी थिएँ। फेरि फर्केर आउँछु भन्ने पनि थियो। पछि उतै बसियो। समय कति छिटो बित्यो पत्तै लागेन।
इन्टेरियर डिजाइन कहाँ पुग्यो त अहिले ? त्यो पनि कता पुग्यो, पुग्यो। सबै कुरा चेन्ज भयो। उता अभिनयका लागि कोसिस गर्नुभएन ?कार्बन मोबाइलको विज्ञापन गरेकी थिएँ। अरू त्यस्तो एक्टिङ नै चाहिँ गरिएन। त्यहाँ भेटघाट, चिनजान हुने सबैले मलाई नेपालको सुपरस्टार भनेर चिन्थे। त्यहाँका मनिसहरूले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। नेपालमा त्यत्रो नाम कमाएर गएको मान्छे मुम्बईमा हजारौँको भीडमा लाइन बस्न मन लागेन।
एक जना साथीको प्रोडक्सन हाउस छ। म त्यही एड्भाइजरको रूपमा काम गरिरहेकी छु। म जहाँ बसे पनि फिल्मसँग सम्बन्धित भएर बस्न चाहन्थेँ। उता पनि फिल्मसँगै सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेको हुनाले खुशी छु। अब नेपाली फिल्मलाई नै निरन्तरता दिनुहुन्छ कि अरू नै केही सोच छ ?
‘नाइँ नभन्नू ल–५’ मा मेरो गेस्ट रोल थियो। त्यो फिल्म गरेपछि धेरै जनाले मलाई ‘निरुताजी, यो फिल्ममा थोरै सिनमा मात्र देख्न पाइयो। पूरै फिल्ममा कहिले हेर्न पाइन्छ ?’ भन्नुभयो। मेरो इन्स्टाग्राम र फेसबुकको म्यासेज बक्स यस्तै प्रश्नहरूले भरिएका छन्।यिनै कुराले मलाई फिल्ममा कमब्याक गर्न घच्घच्यायो। जस्तो पायो त्यस्तो फिल्म गर्दिनँ भन्ने थियो। केही समयअघि किरण केसी दाइको फोन आयो। उहाँले मह सञ्चारबाट ‘दाल भात तरकारी’ फिल्म बनाउन लागेको बताउनुभयो। उहाँहरूसँग काम गर्ने ठूलो धोको थियो।
मह सञ्चारबाट बन्ने फिल्म भन्नेबित्तिकै मैले ओके भनेँ। हरि दाइ र मदन दाइसँग काम गर्न पाउनु मेरो लागि ठूलो कुरा थियो। अहिले धेरै फिल्मका कुरा आइरहेका छन्। वजन भएको क्यारेक्टरमा काम गर्न पाएँ भने अझै काम गर्छु अबको फोकस के हुन्छ ? एउटा–दुइटा फिल्म गरेर मुम्बई नै फर्किनुहुन्छ कि फेरि निरुता सिंह नै बनेर नेपाली फिल्ममा आउनुहुन्छ ?
यहाँ बस्नलाई मेरो घर छैन। घर, परिवार, बसाइ सबै उतै छ। पहिला पो काम पनि यतै थियो। बसाइ पनि यतै थियो। अहिले त यहाँ नामबाहेक केही छैन। त्यसैले मुम्बई त जानैपर्छ। पहिला जुन हिसाबले एकपछि अर्को ननस्टप फिल्म गरेँ, त्यो हिसाबले गर्दिनँ।यत्रो समयपछि फर्किदा पनि
दर्शकको माया मप्रति उत्तिकै छ। उहाँहरूले मप्रति आशा राख्नुभएको छ। मैले उहाँहरूको आशालाई निराशामा परिवर्तन गर्नु हुन्न। वर्षमा एकदुई वटा फिल्म होस्। तर, राम्रो ब्यानर र विषयकोे फिल्म भए मात्र गर्छु।
तपाईंलाई गर्न मन लागेको त्यस्तो कुनै ‘ड्रिम रोल’ छ ? यो नै भन्ने त छैन। तर, मेरो उमेरको हिसाबले मिल्ने खालको रोल आयो भने गर्छु। अब मैले कलेजको टिनेजर केटीको रोल गर्न मिल्दैन। भारतीय फिल्म ‘मम’, ‘हेलिकप्टर इला’, ‘इंग्लिस विंग्लिस’ टाइपको फिल्म आयो भने गर्छु।समयसँगै तपाईंको रोलमा पनि ‘सिफ्ट’ आयो है। टप हिरोइन हुँदाहुँदै अहिले आमाको भूमिका गर्नुपरेको छ। मानसिक रूपमा आफूलाई त्यो चिजमा ढाल्न कत्तिको गाह्रो वा सजिलो भयो ?
यो कुरामा कन्भिन्स्ड हुन मलाई पटक्कै गाह्रो भएन। ‘दर्पण छायाँ’ गर्नुभन्दा अगाडि नै ‘१६ वर्षे जोवन’ भन्ने फिल्ममा मैले दिलिपजीको आमा भएर काम गरिसकेकी थिएँ। मैले ‘खानदान’मा राजेश हमालको पनि आमा बनेर खेलेकी छु। अरू पनि थुप्रै फिल्म छन् जहाँ मैले आमाको भूमिकामा काम गरिसकेकी छु। दिदीबहिनी, आमा मलाई जे बन्न पनि समस्या छैन तर फिल्ममा मेरो सार्थकता हुनुपर्याे बस्।
‘दर्पण छायाँ’लाई उत्तम प्रधान र तपाईं मिलेर फेरि ‘रिमेक’ गर्ने भन्ने कुरा आइरहेका छन्, साँचो हो ? हो। उत्तमजी एकदमै क्रिएटिभ हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो सोच बनाउनुभएको छ। ‘दर्पण छायाँ’को स्टोरी जहाँसम्म पुगेर सकियो, त्यहीँबाट फेरि नयाँ स्टोरी सुरु गर्ने भएका छाैँ। कथाको कन्सेप्ट उहाँले मलाई फोन गर